Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. अमेरिका र इरानबीच किन हुँदै छ टक्कर ? (भिडियो सहित) – Emountain TV
अमेरिका र इरानबीच किन हुँदै छ टक्कर ? (भिडियो सहित)
एजेन्सी, २२ साउन । अमेरिकाले इरानमाथि थप प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । नयाँ प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन हुने अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रमको भनाइ छ । इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले भने अमेरिकी कदम मनोवैज्ञानीय युद्ध भएको टिप्पणी गरे ।
इरानसँग गरिएको परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका गत मेमा अलग भएपछि दुई देशबीच तिक्तता बढेको छ । यसैबीच अमेरिकाले इरानविरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
आर्थिक दाबाबका कारण इरान नयाँ सम्झौता गर्न तयार हुने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दाबी छ । अमेरिकाले इरानको अटो मोबाइल क्षेत्रका साथै बहुमूल्य धातु एवम् सुनको व्यापारमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
यसको साथै दुई मुलुकबीचको वित्तिय कारोबार, सामुद्रिक जहाज निर्माण, पेट्रोलियम पद्धार्थसम्बन्धि लेनदेन लगायतमा पनि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
अमेरिकाको पछिल्लो कदमप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले अमेरिकी कमद मनोवैज्ञानीय युद्ध भएको टिप्पणी गरेका छन् । रुहानीले अमेरिकासँग तत्काल वार्ताको सम्भावना नभएको भन्दै कूटनीति र वार्ताको पक्षमा रहे पनि यसमा इमान्दारिता जरुरी रहेको बताए।
अमेरिका र इरानबीच किन हुँदै छ टक्कर ?
Posted by Mountain Television on Tuesday, August 7, 2018
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने प्रतिबन्ध उल्लंघन गरे गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानमाथि लगाइएका नयाँ प्रतिबन्ध पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने बताए ।
सन् २०१५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा अमेरिका, रुस, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स र जर्मनी मिलेर इरानसँग परामाणु सम्झौता गरेका थिए । अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्ध लगाएसँगै सन् २०१५ को परमाणु सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता ५ देश रुस, चिन, ब्रिटेन, फ्रान्स र जर्मनीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
ति राष्ट्रहरुले इरानसँग गरिएको प्रतिवद्धता निर्वाह गर्ने जनाएको छ । पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले भने इरानले बनाउने परमाणु हतियार रोक्न र विश्वलाई सुरक्षित राख्न मद्दत पुग्ने उद्देश्यले इरानसँग आफुले सम्झौता गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
अमेरिका परमाणु सम्झौताबाट अलग भएपछि इरानले गम्भिर आर्थिक समस्या झेल्दै आएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्ध पछि इरानसँगको कच्चा तेलको व्यापार, उर्जा, पानी जहाज निर्माण, स्टील, कोइला, सुन र अन्य धातु व्यवसाय प्रभावित हुनेछ ।
मङ्गलबार, २२ साउन २०७५
भारतद्वारा पनि बोइङ ७३७ जहाजमाथि प्रतिबन्ध